Sary famoahana ny razana teny Andohalo | Hevitra MPANOHARIANA
Misaotra betsaka amin'ny sary. Fa angaha tsy ianao no naka ary fa nalaina ?
Nampidirin'i Kdaombaramita @ 05:45, 2010-05-25 [Valio]
Misaotra sy mankatelina @ fampitana vaovao.
Andriamanitra tsy mandao izay mahatsiaro azy !
Nampidirin'i Ralandy @ 06:51, 2010-05-25 [Valio]
misaotra an'Andriamanitra isika fa nomeny hery ity mpanompony ity ho sahy hijoro amin'ny fahamarinana.
Nampidirin'i dah @ 09:08, 2010-05-25 [Valio]
Mpihatsara ivelan-tsihy no betsaka...
Tsara angamba raha toa ka nahay nanaja tena tahaka an'i Ndrema ny pasitera Ramino. Mazava mantsy fa Ramino dia anisan'ny nametraka izao fitondràna mamoa fady izao. Sao sanatria re ka fandatsana ry Sefo Ramino Paul izao zavatra ataonao izao. Ianao no nanangana ny basy nitifirana io Pasitera io, dia anefa sahinao ny mijoro eo anoloany izao... Misy ny famelan-keloka fa tsy mora ny manadino.
Nampidirin'i Alidera A.R. @ 09:10, 2010-05-25 [Valio]
"EFA HALANY TALOHANAREO AHO". Tiré de dos, mitifitra ivoho, izay ihany no talentan-drizalahy FAT ireo. An'iza no manaraka. Mazava fa "Symbole" no voatifitra. Hisaorana ilay nahavanon-doza, saingy misaotra anareo FAT mampahatsiahy anay liana ny fahamarinana fa ny Tomponay tsy nijanona ao am-pasana fa "VELONA" "FAHAMARINANA-VELONA" mandrakizay. io no tsy tantinareo FAT dia mihezaka mitifitra rivotra lava izao. Hitanareo FAT teny Ambohitrombihavana ny santionan'ny vahoakan'Andriamanitra, démultiplicateurs-n'ny fahamarinana, na ny nandevina ny Cardinal aza tsy toa izany.
Nampidirin'i Ambohitrombihavana @ 11:05, 2010-05-25 [Valio]
Mahereza daholo isika ary aoka tsy hiisy hihemotra fa tsy maintsy avotana ny Tanindrazana . Mahaleova ary mahalasàna daholo fa masina ny Tanindrazana
Nampidirin'i fandresena tena izy @ 11:38, 2010-05-25 [Valio]
manana maso lavitra tokoa manana anao! Enga anie mba tsy aim-beri-maina ny an'i Pastera ary Andriamanitra mamaly ny zavatra rehetra hanonitra ny vidin'ny ràny latsaka!
Nampidirin'i gasi @ 12:30, 2010-05-25 [Valio]
Alidera> Ankoatra ny maha-samy mpitandrina FJKM azy ireo dia manana rohim-pihavanana ihany koa ny Mpitandrina Ramino Paul sy ny mpitandrina nodimandry.
"cousin"-dramatoa vadiny manko ny mpitandrina Rivo. Nezahina ihany koa ny tsy idiran'ny politika ilay fotoana araka izay azo nataa.
Nampidirin'i jentilisa @ 18:21, 2010-05-25 [Valio]
Misaotra an Anadriamanitra fa nahavita ny asany ny mpanompony ary t@ fahavonana no nanaovany izany, mampahery ny vady amanjanaky Pasteur. Tsy very maina akory ny tolona zay efa natombony. Maritioran ny fiangonana sy ny firenena izao mpanompon'Andriamanitra izao. HANANATRA izay nahavanon-doza sy korontana izzao anie ny Tompo.
Nampidirin'i NIAINA R @ 22:44, 2010-05-25 [Valio]
manatitra ny fisaorana ho antsika izay tonga nifankahery tamin'ny nahalasana ny mpitandrina RIVO ARISON, tena hita amin'ireny, ary tena voaporofo fa "solidaire" daholo,no tena miavaka ny zanak'i dada.
Nampidirin'i fankasitrahana @ 09:53, 2010-06-01 [Valio]
fa ilay dada-nareo ve no Andriamanitra é !
Nampidirin'i zanaka adala @ 21:20, 2010-07-18 [Valio]
Tsy misy mivavaka amin-dRavalomanana eo ry zanaka adala a!
Nampidirin'i jentilisa @ 07:58, 2010-07-19 [Valio]